यी हुन् एकै पटक आठ बच्चालाई जन्मदिने ‘अक्टोमम’, यसअघि पोर्न स्टार ! (फोटो फिचर) - Arghakhanchi Saptahik
यी हुन् एकै पटक आठ बच्चालाई जन्मदिने ‘अक्टोमम’, यसअघि पोर्न स्टार ! (फोटो फिचर)
एजेन्सी, तपाईले जुम्ल्याहा वा तिम्ल्याहा
जन्मिकएकोत सुन्नु र देख्नु भएको छ होला तर के तपाईले एकै पटकमा आठ वटा बच्चालाई जन्म दिएको कहिल्यै सुन्नु भएको छ। अमेरिकाको एक महिलाले एकै पटकमा आठवटा बच्चालाई जन्मि दिएकी खबरले अहिले उनी चर्चामा आएकी छिन्।
क्यालीफोर्नियामा बस्दै आएकी उनको नाम नेटली सुलेमान हो। नेटलीले सन् २००९ मा एकै पटकमा ८ वटा बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन्। यहीकारणले उनी अहिले पनि निक्कै चर्चामा रहेकी छिन्।
त्यतिबेला उनी अमेरिकाको हरेक टीभी च्यानेल र रेडियोमा छाएकी हुन्थिन। समाचार बताइए अनुसार उनी पहिला पोर्नस्टार समेत हुन्। जब उनी विवादमा आइन् ।
त्यसपछि उनी एकाएक गायब भएकी थिइन्।
उनले यसपछि आईवीएफ ट्रिटमेन्ट गरेर ८ वटा बच्चालाई एकैसाथ जन्मदिइन्। यसअघि पनि उनले यही तरिकाबाट ५ वटा बच्चालाई जन्माएकी थिइन्। उनलाई अहिले अक्टोममको उपनामले चिन्ने गरिन्छ। अक्टोमम बनेपछि उनलाई शारीरीक कठिनाइ आइपरेको छ।
तर उनी एक समय काम नपाएर निक्कै तनावमा थिइन्। छिमेकीहरुले खराब भनेर कुरा काट्ने गरेको उनीले अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई बताएकी छन्। समाचार
अनुसार एक पटक त झण्डै जेनेक्स ड्रग्सको ओभरडोजले उनको ज्यान गएको थियो।
अहिले १४ बच्चाकी आमा बनेकी नेटली पहिला भने पोर्न फिल्म तथा स्ट्रिप क्लब्समा काम गर्ने गर्थिन्। तर जब उनी आमा बनिन्, उनले यो काम छाडिन्। त्यपछि उनलाई केही मेडियाले फोटो सुटको लागि करीब ६७ लाख डलरको अफर गरेको थियो। त्यसपछि उनले तीन मिडियाका लागि उनले नाङगै फोटोसुट गरिन्।